Dhaqdhaqaaqa raaxeysan oo aan kudhicin Style Dhaqdhaqaaqa
Dhaqdhaqaaqa raaxeysan oo aan laheyn qaabka soo jiidashada
Waxaa laga yaabaa 01, 2018
HAWLGALINTA HORUMARKA BILAASH AH LACAG LA'AAN AH EE BUDDHA
Haddii aad raadineyso dhar raaxo leh, oo dhar la'aan ah, oo aanad u diyaarsanayn dareenkaaga, waxaad ku sugan tahay meeshii saxda ahayd. Dhaqanka ayaa mar walba cadaadis badan ku riday haweenka si ay u hoggaansamaan shuruucda iyo waliba shaki la'aan, in maskaxdani ay naga dhigto inaan ku noolnahay xabsi ku yaalla bulsho isku mid ah iyo dhar labis ah. Haddii aad diyaar u tahay dharkaaga si aad u noqoto mid ka tarjumaya dabeecaddaada, ha fiirsanin, raadso xoogaaga gudaha ah iyo tuso style of your unique!
Ka hadlidda dharka, waxaad lumin kartaa naftaada isla markaana isku day inaad naftaada isku aragto kala duwanaanshaha fursadahaaga aad isku kalsoon tahay. Badanaa waad heli kartaa dharka xarkaha,dharka quruxda badan, Dharka Shiinaha, dharka ubaxa iyo in ka badan. Ku saabsan qalabka, waxaad ka heli kartaa wax kasta oo aad u baahan tahay si aad maqaarkaaga u neefsato, suufka tayada sare leh, dharka, dhejiska iyo laga yaabee oo dhan isku dhafka. Dhammaan midabada, wax macquul ah maaha in la doorto hal kaliya marka ay jiraan tiro doolar ah. Waxaad ka dooran kartaa wax kasta oo ka mid ah dharka midabada midabada, ubax la duubay, si aad u daboolatid bohemian, si aad u jilicsan u daabacan, midabada badda, caleemaha ubaxa, dharbaaxa, socodka iyo fursadaha waa kuwo aan dhammaad lahayn, waxaad kaliya sheegeysaa.
Inaad ka soo gashid dharka ilaa dhirta oo kala gedisan ee qaybo yar: blouses iyo shirts, dhididka iyo reysashada, kaararka iyo kimonos. Waxay kaa heleen dhamaanba habka guga roobabka, kulaylka kulul, maalmaha dayrta ee breezyada iyo qaboojinta jiilaalka. Qaybtan, waxaad ka heli doontaa alaab kala duwan sida suufka, dharka, dhogorta, diimka ama gawaarida iyo nooc kasta oo noocyo ah sida qadka O-ga ama qoorta V ama qoynta dhaadheer oo badan. Waxaa sidoo kale jira qadar xaq u leh joodar weyniyo dharka dharka. Iyada oo ku xiran dhererka, waxaad ku xiran kartaa ama aan la jimicsi lahayn ama laba kabood oo hoosta ku xiran ama waxay ku xiran tahay xilliga iyo cimilada. Waxa kale oo aad dooran kartaa qaabka gacmahaaga, gacmo furan oo dheeraada ama gacmo furan. Iyada oo ku xiran mawduucaaga waxaad dooran kartaa noocyada noocyada kala duwan ee aad ku raaxeysan kartid, hase yeeshee aanad u baahnayn in aad wax u dhinto qaabkaada. Waxaad raaci kartaa midda fudud sida mid ka mid ah midabka midabada leh ama dharka midabada leh ama laga yaabo inuu kaadimaado, ama midka caadiga ah ee caadiga ah maalmaha caadiga ah ee beerta; ama calaamad dherer; ama laga yaabo in xayawaan midab leh oo keenaya qoraal xiiso leh oo ku saabsan qaabkaaga. Ama waxaad had iyo jeer dooran kartaa waxyaabo aan caadi ahayn marka la eego dareenka tijaabinta midabada iyo ka baxsan aaggaaga raaxada sida iibka style bohemian ah oo ah mid aan caadi ahayn iyo canjeero; Waxyaabo dheddig ah oo aan walax lahayn sida duubisyada leh daabacaadda ubaxa ama daabacaadda ubaxa; ama waxaad raaci kartaa qaabab qabiil oo lagu daboolay khariidado ku soo laaban kara ama waxaad raaci kartaa dharka dhirta dhaadheer iyo jilbaha dherer dhir leh oo leh muuqaal sawir aan rasmi ahayn, wax ka baxsan kuwa caadiga ah laakiin weli aad u qurux badan. Waxa ka sii badan, waxaad ka heli kartaa halkan jiilaalkaaga asaasiga ah, sida jaakad dhogorta ah iyo sidoo kale jaakadaha denimka ee jilicsan.
Daboolka ayaa sidoo kale laga soocaa qaybo kooban: surwaal, harem surwaal, guud ahaan, Iyo daraftiisa. Laga soo bilaabo qaybta loo yaqaan 'trousers section' waxaad ka dooran kartaa surwaal duubo gawaarida oo leh meelo badan oo ballaadhan; marka loo barbar dhigo santuuqa palazzo micnaheedu waa inay gooyaan dabacsanaan iyo lugaha oo aad u ballaaran oo ka hooseysa hoosta; marka loo eego sarrifka sarreeya ee suunka suufka ah ee xoogga saaraya dhererka aad ka dhigeyso inaad u eegto jilicsan iyo sheyga loo yaqaan "hourglass"; Waxa kale oo aad heli kartaa surwaal duuduuban oo kaa dhigi doona inaad fiiriso lugaha oo fiiro dheeraada. Waxay ku qulqulayaan, lugaha oo dhan ka gooyaan nooc kasta oo dhar ah sida dharka, suufka ama corduroyka iyo ku haboonaanta qaabka casriga ah ama canjeeraha-boho oo leh qaabab kala duwan. Harem pants ayaa la aaminsan yahay in ay ka soo jeeda dunidan bariga ah waa qeexida dhabta ah ee surwaalada midabka, bacaha, dheer iyo qabsaday canqowga. Waxay ku raaxaystaan ​​inay xirtaan, madadaalo iyo midab leh. Waxaad dooran kartaa in ka badan hal daabacaad oo dhaqanka galbeedka ah sida quruxda Aasiya ama jibbaarada kuwaas oo astaan ​​u ah Asia. Ama waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad hesho wax ka buuxsamaya ubaxyo iyo midabyo madow oo si sahal ah loola qabsan karo sariiraha iyo funaanado fudud ama blouses. Dhamaan waxyaalahaas oo kala duwan iyo midabyada kala duwan waxay u ekaadaan oo waxay xusuusiyaan inaanu farxad, farxad iyo farxad u qaadanno nolosheena. Xitaa waxaad ka heli kartaa surwaalada bareemka sariirta leh halkii ay ku haboontahay dabacsanaan, nadiif ah iyo mid aad u wanaagsan. Haddii ay tahay wax fudud, ka badan waxaad ku dhegi kartaa qaabka monochromatic ah oo aanad marnaba khalad u gali karin. Hase yeeshee, ugu dambeyn laakiin aan ka yareyn muhiim waa darfiyada in ay tahay qayb muhiim ah oo ka mid ah dhar kasta oo dumarka ah. Waxay ku jiraan gooyo dabacsan oo badanaaba leh dhexda. Waxay u egyihiin sida midda gacan-qabsiga, oo ay weheliso midabkeeda iyo isku-dhafka iyo walxaha. Waxay leeyihiin kuwa leh shaqooyin caan ah oo la isku qurxiyo iyo hal shaybaarka shinida leh iyo daanyaha dharka leh, taas oo micnaheedu yahay dariiqyadani waxay leeyihiin habdhaqan dhaqameedyo iyo farsamo. Tani iyo kuwo kale oo isku mid ah oo ka tarjumaya qaabka gaarka ah ee aad ka heli karto www.buddhatrends.com. Waxaad sidoo kale ka heli kartaa guud ahaan, guud ahaan jiilaalka, madow, dharka guud iyo dheelitirka guud. Kuwa madow, waxay ka tagaan guud ahaan palazzo guud ahaan si ay u qaabaysan yihiin iyo kuwa caadiga ah ee waa waajib in kasta oo dharbaaxo ah si ay u dhameystirto casrigaaga ama qaabka ganacsiga. Kuwaas waxaa laga sameyn karaa corduroy ama dumin tayo sare leh.
Tags: Dharka Patchwork,Dharka dhirta, Dhaqanka Buddha,Hippie Dresses, Harem Pants For Women, Hippie Jarmal